संस्कृति शक - अमेरिका मा जीवन समायोजन | USAHello | USAHello
तपाईं नयाँ संस्कृति गर्न समायोजन रूपमा, तपाईं जहाँ तपाईं विभिन्न तरिकामा महसुस फरक अवधि पार हुन सक्छ. प्रक्रिया को भाग रूपमा जानिन्छ “संस्कृति आघात।” संस्कृति आघात बारेमा बुझ्न तपाईं भावना स्वीकार र सजिलो समायोजन बनाउन मदत गर्नेछ.
सांस्कृतिक अभिमुखीकरण संसाधन केन्द्र को छवि शिष्टाचार
माथिको चित्र कसरी मानिसहरू सांस्कृतिक समायोजन को चरणमा मार्फत जाने रूपमा महसुस देखाउँछ. का थप विवरण मा चरणमा हेरौं.
जब तपाईं पहिलो संयुक्त राज्य अमेरिका मा आइपुग्दा, तपाईं खुसी र उत्साहित महसुस हुन सक्छ. तपाईं आफ्नो नयाँ जीवन मा के हुनेछ लागि लक्ष्य धेरै र आशा हुन सक्छ. तपाईं शायद एक लामो समय को लागि अमेरिका आउन प्रतीक्षा गरिएको छ. तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका को बारेमा महान कुराहरू धेरै सुनेका हुन सक्छ. तपाईं चाँडै एक राम्रो काम प्राप्त हुनेछ आशा, राम्रो घर छ, र कमाउन अंग्रेजी. तपाईँलाई भयातुर हुन सक्छ, तर तपाईं अमेरिका मा सबै नयाँ कुरा गर्न तत्पर.
सबै फोहोर छ कि सोच
तपाईंलाई अमेरिकी संस्कृति भयानक छ भनेर सोच्न सुरु गर्न सक्छन् वा तपाईंलाई अमेरिका बारे केहि रुचि छैन भनेर. कृपया थाहा यो नयाँ संस्कृति बस्ने सबै मानिसहरूको लागि एक साधारण चरण हो कि. अन्ततः, तपाईं अर्को चरण गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ. तपाईं सार्न भने, र तपाईं अझै पनि दुःखी वा रिस महसुस, तपाईं अतिरिक्त मद्दत चाहिन्छ सक्छ, तपाईं यसको बारेमा आफ्नो caseworker कुरा गर्नुपर्छ. शरणार्थी रूपमा, तपाईं धेरै गाह्रो कुरा मार्फत गरिएको छ र यसलाई अतिरिक्त मद्दत चाहिन्छ सबै सही छ.
केहि समय पछी, तपाईं आषा संस्कृति आघात चरण गत उत्प्रेरित गर्नेछ र तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा जीवन समायोजन गर्न सुरु हुनेछ. तपाईं जीवन नयाँ देशमा जस्तै हुनेछ के को वास्तविकता बुझ्न सुरु. तपाईं एक कम तिर्ने काम किनभने यो आफ्नो परिवार मदत गर्नेछ लिन निर्णय गर्न सक्छ. तपाईं अंग्रेजी सिक्न सुरु हुनेछ. तपाईं शायद तालिका छ शुरू गर्दै छन्. जीवन सामान्य महसुस गर्न थाल्छ.
यो समय अवधिमा एक साधारण चुनौती छोराछोरीलाई अधिक चाँडै तपाईं भन्दा संयुक्त राज्य अमेरिका मा जीवन समायोजन हुन सक्छ कि छ. यो धेरै साधारण छ, तर छोराछोरीलाई आफ्नो घर संस्कृति गर्न सम्पर्कमा रहन मदत गर्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ कुराहरू छन्.
यो सांस्कृतिक समायोजन अन्तिम चरण हो. यो समयमा, अमेरिका घर जस्तै महसुस गर्न सुरु हुनेछ. तपाईं यहाँ हौं जस्तै महसुस गर्न सुरु हुनेछ. अब तपाईं आफ्नो संस्कृति को भागहरु संग अमेरिकी संस्कृति को भागहरु मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं साँच्चै आफ्नो घर देशबाट कदर साँच्चै संयुक्त राज्य अमेरिका र कुराहरू बारे जस्तै कुराहरू तपाईं हुन सक्छ. तपाईं सजिलै संयुक्त राज्य अमेरिका मा आफ्नो दैनिक जीवन चलाउनु गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं शायद केही अमेरिकी साथीहरू र पनि आप्रवासी र शरणार्थी भएका केही साथीहरू छन्. अब तपाईंको शिक्षा सुधार जारी गर्न समय छ. तपाईं चयन हुन सक्छ एक अमेरिकी नागरिक बन्न.
अमेरिकी संस्कृति र समाज बुझ्न